I-Crystal Paper I-Snowflake Ornaments
Yenza Imihlobiso ye-Crystal Snowflake eyenziwe ngesandla
Yenza imihlobiso yakho yeqhwa le-snowstal nge-cryxlizing i- borax kwiphepha le-snowflakes. Ezi ziflephu zeqhwa ezinqabileyo zinokwenziwa nawaphi na ubukhulu ukuze zihambelane neemfuno zakho zokuhlobisa.
Izinto zokwakha i-Crystal Snowflake Ornaments
iifomathi zekhofi ezijikelezayo
umbala wokutya (ukhetho)
Yenza i-Crystal Snowflake Ornaments
Sika iphepha lekhephu (okanye enye imo) ukusuka kwifowuni yekhofi.
Lungisa isisombululo sekristal ngokushukumisa i-borax ibe ngamanzi abilayo uze ungayi kuphonswa. Uya kukwazi ukuba isisombululo silungile ukuba i-borax powder iqala ukuqokelela kwizantsi yesitya sakho.
Yongeza umgca wokubala umbala, ukuba ufuna iingubo zeqhwa ezinemibala.
Beka iphepha leqhwa kwiqhekeza okanye i-saucer. Dlulisa isisombululo sekristal phezu kweqhwa leqhwa, uqinisekise ukuba lihlanganiswe ngokupheleleyo.
Vumela amakristali ukuba akhule kwiqhankqalazi yeqhwa uze unelisekile ngobukhulu bawo. Amakristal amancinci athatha malunga neyure ukuyila. Unako ukuvumela ukuba i-crystals ikhule ngaphezu kobusuku ukuba ufuna i-crystals ezinkulu.
Gcoba isisombululo se-crystal uze udibanise ngokucophelela i-crystal snowflake kwi-plate. Oku kuhle kakhulu kwenziwe ngommweba okanye ibhotela. Unokususa naziphi na izikristali ezinamathele emingxondweni yeqhwa leqhwa. Vumela i-snowstal iqhankqalazi ukuba iyomile ngaphambi kokuba uyisuse kwaye uyixhome.
Ezinye iintlobo ze-Crystal Snowflakes
Ukuba awunayo i-borax, unako ukwenza le projekthi. Ungathatha ezinye izaluthi, ezifana neetyuwa, ityuwa, okanye i-Epsom. Yenza nje ityuwa ibe ngamanzi ashushu uze ungayi kuphinda uchithe.
Enye indlela yokusebenzisa ushukela.
I-cryar crystals isebenza ngendlela efanayo, kodwa awudingi amanzi amaninzi ukuchitha ininzi ishukela. Qala ngexabiso elincinci lamanzi abilayo (mhlawumbi indebe yesiqingatha) kwaye ugxobhoze ushukela aze ayeke ukutshabalalisa. Enye indlela yokubilisa amanzi kwisitofu kwaye ungeze ushukela. Vumela amanzi ashukela aphuze kancane aze athulule phezu kwephepha leqhwa.
Isisombululo seShukela sinobukhulu kakhulu njengoko siphunga, ngoko kulungile ukuyisebenzisa ngelixa kushushu.
Abantu baseMelika abaLwazi ngo-1940 kubalo lwabantu base-US
Ukuguquka kweMelika 101
Iingongoma ezisibhozo ze-Charter yase-Atlantic Isayinwe nguChurchill noRoosevelt
Yiyiphi i-Rolling Admission?
Abazimeleyo kunye namaPirati: uBartholomew Roberts
2017 I-PGA Championship: U-Justin Thomas 'First Major Win
Iimfuno Ezidumile ezifana neHerris Wheel
Ukulwa no Bukhwele
"I-Mulatto: Intlekele yezantsi eMzantsi"